Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo tababar Puntland ugu soo xiray Ciidamo Boliis ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo tababar Puntland ugu soo xiray Ciidamo Boliis ah
MAREEG 12 October 2015
Garoowe ( Mareeg)-Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Jeneraal Max’ed Sheekh Xasan Xaamud ayaa tababar ugu soo xiray Magaalada Carmo ee maamulka Puntland Ciidamo ka tirsan Boliiska maamulka Puntland.
Jeneraal Xaamud ayaa kula dar daarmay in Tababarka ay qaateen Ciidamadaasi loo baahan yahay in ay uga faa’ideeyaan shacabkooda ayna si wanaagsan uga shaqeeyaan nabad gelyada.
Wasiirka Amniga Puntland Cabdi Xirsi Qarjab oo isna ka hadlay Munaasabadda tababarka loogu soo xirayay Askartaasi ayaa ku nuux nuuxsaday in Ciidamada ay tababareen la geyn doono Gobollada iyo deegaanada Puntland si ay ammaanka gacan bir ah ugu qabtaan.
Puntland deegaanadeeda ayaa ka mid ah meelaha ugu xasiloon guud ahaan deegaanada dalka, walow mararka qaar shaqaaqooyin aan badneen ay ka dhacaan.
Ciidamada Tababarka u soo xirmay ayaa la sheegay in laga soo kala xulay inta badan deegaanada maamulkaasi.